२०७७ कार्तिक १ शनिबार ०९:५८:००
नेपाली सुगम संगीतको क्षेत्रमा स्वरूपराज आचार्य लोकप्रिय नाम हो । २७ वर्षको सांगीतिक करिअरमा उनले पाँच हजारभन्दा धेरै गीत गाइसकेका छन् । जसमध्ये उनका सयौं गीत लोकप्रिय छन् । भक्तराज आचार्यका छोरासमेत रहेका उनी आफू र सत्यराज (दाइ) को गायकी सधैँ बुबासँग तुलना गरेर स्रोताले सुन्ने गरेको बताउँछन् । ‘लिजेन्ड’ गायक–गायिकाका छोराछोरीलाई उनीहरूको पदचाप पछ्याउन सुरुका दिनमा जति सजिलो हुन्छ, पछिल्ला दिनमा त्यति नै कठिन हुने गरेको उनको अनुभव छ । उनै स्वरूपराज आचार्यसँग कोरोनाका कारण सांगीतिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव, पछिल्लो समय युट्युब केन्द्रित हुन थालेका गीत र कलाकार, गीतको गुणस्तर र व्यावसायिकता तथा भक्तराज आचार्यलाई स्वरूप आफ्ना सिर्जना सुनाउँछन् वा सुनाउँदैनन् ? स्वरूपले गीत सुनाउन खोज्दा भक्तराज सुन्छन् वा सुन्दैनन् ? यी र यस्तै प्रश्नको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका नरेश फुयाँलले गरेको कुराकानी :
अगाडि भनेकै कुरा दोहोरिन्छ, राम्रो भए यति त गाउनै पर्यो । नराम्रो भए यस्तो के गाएको ? लिजेन्डका छोराछोरीहरूले भोग्नुपर्ने समस्या नै यही हो । जीवन रहेसम्म सत्य र मैले आफूलाई प्रमाणित गर्दै बित्छ । मात्रै भक्तराज आचार्यसँग तुलना । ‘मधुशाला’ र ‘मनमोहिनी’ जस्तो प्रयोग गरिएको एल्बम अरूहरूको कमै होला । इन्डियनहरूले सुने भने पनि वाह...वाह... भनेर तारिफ गर्छन् होला । त्यो एल्बम अरूले गरेको भए कति तारिफ हुने थियो । तर, हामीले गरेकाले भक्तराजका छोरा यति त गर्नै पर्यो नि भन्ने भयो ।
तस्बिर स्वरूपराज आचार्यकाे फेसबुकबाट
तलको लिंक पनि पढ्नुहोस् :
२७ वर्षदेखि भक्तराज आचार्यको एउटै दैनिकी